🥇 ▷ Bangiyada tamarta ugu fiican waxay ku dallacaan taleefankaaga bilaa wireless ✅
Bangiyada tamarta ugu fiican waxay ku dallacaan taleefankaaga bilaa wireless
Mid ka mid ah ciladaha tiro badan oo mobilada ah ayaa ah nolosha batroolka, marka, haddii aan dalbanayno isticmaaleyaal, waa inaan ku soconnaa xarkaha ama, haddii aan ku guuldaraysanahay, koonto awood leh si aan looga fogaan. Bangiyadan korantada ahi waxay soo baxeen taleefannada gacanta iyo sidoo kale taageer kicinta bilaa wireless, si aan u dallaci karno taleefanno isku-habboon oo aan lahayn fiilooyin.
Suuqa bankiga korantadu aad ayuu u balaadhan yahay oo leh naqshado badan, awoodo iyo dekedo. Si lagaaga caawiyo go’aaminta midka kugu habboon, Waxaan doorannay bangiyada awoodda ugu fiican ee leh koronto la’aan si aan u dallacno taleefanka gacanka oo aan lahayn fiilooyin. Dabcan, kahor intaadan iibsan midkoodna, waa inaad hubisaa in moobiilkaagu leeyahay taageerada kicinta wireless-ka. Waad arki kartaa haddii aaladdaadu ay tahay mid ka mid ah marinnada ugu wanaagsan ee ku dallaca ku-dallaca wireless-ka ee sannadka 2019.
RLERON baytariga banaanka ah ee wireless – 25000 mAh –
Batariga bilaa-waayirka ah ee RLERON wuxuu leeyahay batari ah 25,000 mAh awood, oo ku filan in lagu dallaco 5-7 jeer iPhone XS ama 4-6 jeer Samsung Galaxy S9 Marka lagu daro ku dallaca wireless-ka, bangiyadan awooddu waxay la jaan qaadayaan dhammaan badeecadaha iyada oo loo sii marayo fiilooyinka USB-ga labadaba macruufka iyo Android. Thanks to this, waxaan ku soo celin karnaa qalabkeena adoo adeegsanaya USB-C ama USB cable USB mudo 10 – 12 saacadood ah iyadoo ay ugu wacan tahay ku soo dallacaya deg degga 2.4A. Iyada oo seddexdeeda soo saare (5V / 2.4 A) lagu soo dallacayo koronto la’aanta, waxay noo oggolaaneysaa inaan isku dallacno illaa 4 qalab isla waqti isku mid ah. Waxa kale oo ku jira tooshka tooska ah ee LED-ka iyo RoHS iyo shahaadada FCC, kana soo hor jeeda culayska xad-dhaafka ah iyo wareegga gaaban.
Iibso RLERON batari banaanka ah – 25000 mAh Amazon
Bangiyada korontada IWALK Qiimaha – 10000 mAh –
Bangiyada Quwada Wireless-ka ee loo yaqaan ‘IWALK Qi Wireless Power’ ayaa leh 10,000 mAh, ku filan in lagu dallaco iPhone X 2-3 jeer. Thanks to coils induction coil, waxay u saamaxaysaa ku dallaca wireless-ka ee 360º. Waxa kale oo ku jira wadarta 4 dekedood: 2xUSB-A, 1xUSB-C, 1xMicroUSB. Iyada oo la adeegsanayo dekada USB-C waxaan ku heli doonnaa xukun deg deg ah illaa 15W.
Iibso iWALK Qiimooyinka bangiyada korantada – 10000 mAh Amazon
Bangiyada korantada ee Yutre – 22400 mAh –
Bangiyada korantada ee Yutre waxay leeyihiin awood ay ku yeeshaan 22400 mAh, oo ay ku qalabeysan yihiin ICs badan si looga fogaado culeyska, kuleylka ama wareegyada gaagaaban, si aan mobiladeena u ilaalino inta lagu amrayo. Waxay leedahay shaashad LCD ah taas oo u adeegi doonta inay ogaato mar kasta awoodda bateriga haray. Waxay kujirtaa laba dekedood oo dheeri ah oo kuxiran dekeda Micro USB waxaana culeyskiisuna gaarayaa 450 garaam, taasoo ah wajigeeda ugu xun.
Iibso bangiyada korantada ee Yutre – 22400 mAh Amazon
KEDRON baytariga wireless ee banaanka – 24000 mAh –
Bateriga wireless-ka KEDRON wuxuu leeyahay awood ilaa 24000 mAh Waxay ku habboon tahay ku dallacsiinta illaa afar qalab hal mar, maadaama, marka lagu daro ku dallacaadda wireless-ka, ay ka mid tahay 3 dekedaha USB ah oo ku amraya dhakhso. Waxay leedahay wax soo saar USB-C, Micro USB iyo deked hillaac. Waxay leedahay soo bandhig muujinaya wakhti kasta boqolkiiba inta batteriga haray culeyskiisuna gaarayo 350 garaam.
Iibso KateRON batteriga wireless – 24000 mAh Amazon
POWERADD charger wireless – 10000 mAh –
Aalladda korantada ee POWERADD waxay leedahay awood ah 10,000 mAh, oo leh 15W oo degdeg ah oo ku dallacaya USB-A iyo USB-C, awoodi kara inuu kugu dallaco illaa 3 aalad hal mar. Waa bangiyada korantada oo leh dhammeystir fiican tan iyo markii laga sameeyay aluminiumka, xoqidda iyo xoqidda xoqida, waxayna leedahay culeys dhan 380 garaam.
Iibso kulka fiilooyinka POWERADD – 10000 mAh Amazon